Iyo mhete nyowani yeApple Watch yaizove iyo "Kufunga" | Ndinobva mac
Uye ndezvekuti isu ikozvino tine zvindori zvitatu zviripo paApple Watch kuongorora chiitiko chemuviri Uye isu tinotova nechikumbiro chekufema, yanga iri nzira inonakidza yekuteerera nekuzorodza muviri wedu kwechinguva uye nekuenderera mberi nebasa redu. Ikozvino kusvika kwerin'i nyowani yeApple Watch kunatsiridza chiitiko cheKufunga ndizvo zviri kupomerwa netiweki.
Zviripachena iyo Apple wachi ishamwari yakanaka kudzora akakosha zviratidzo mukuwedzera kubvumira mushandisi kutora miniti yenguva yekufema neyekufema application pachayo, asi mune iyi nyaya sarudzo nyowani inoenda nhanho imwe kumberi uye sezviri pachena Apple ingadai yatove kuyedza mukati pamwe nevamwe vashandi iyi yechina bhora kana mhete yekufunga kudzikisa kusagadzikana kwemushandisi, kugadzirisa hutano uye hupenyu hwehupenyu hwevanhu.
Kupfuura nharaunda nyowani, kwaizove kumisa sarudzo nyowani muBreathe application pachayo, asi mamwe midhiya anovimbisa kuti mhete nyowani yaizowedzerwawo nemushandisi aigona kunyatsoona kufambira mberi zuva rese. Zvese izvi zvechokwadi zvaizowanikwa gore rinouya mu linotevera vhezheni yeOSOS 5 inoshanda sisitimu, saka kwasara mazuva mashoma kuti uzive kana izvi zvinyatsoitika pasina kana ichokwadi kuti Apple yaizoita iyi mhando yekurovedza muviri mune smart wachi.
Ini pachangu, ndinogona kutaura kuti dzimwe nguva kunyorera nerudzi urwu rwezviziviso kunonditakudza zvishoma, asi ini ndinobvuma kuti iko Kufema application ini ndinowanzoishandisa kanopfuura kamwe, kunyangwe iyo Apple Watch isati yatora, yatove nzira yakanaka yekuzorora munhu wese. Mune ino kesi neMindfulness kune zvidzidzo zvinoratidza kuti zvinonyatsobatsira vanhu, saka zvakakosha kuti uterere izvi zvinokurudzirwa kana tiri kutambura nenguva dzakanetseka kana zvimwewo, unofanirwa kuzvitarisira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo mhete nyowani yeApple Watch ingave iri "Kufunga"